Author: Shakagar Mazutilar
Qodobka aad- Qodobada ku dabaqma wax ka badelka Dastuurka ku meel somoaaliya ah Jadwalka koowaad Cama sharci lagu xusay jadwalka koowaad D ee Dastuurkan ka hor inta aanay dhammaan xilliga koowaad ee Baarlamaanka Federaalka: Cutubka 16aad – Qodobbada Guud.
La tashiga iyo wax isu-oggolaasho dhex mara dhinacyada ay khuseyso; 2. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Su’aal la xiriirtay in waqtigu gabagaba yahay isla markaasna uusan meesha ka muuqan dastuur weli dayaar ah wasiirku wuxuu sheegay inaysan wanaagsnayn in hawl noocan oo kale ah degdeg ah lagu dhaafo arrintuna tahay mid u baahan in degganaan iyo ka fiirsi badan lana mariyo hannaanka ay u baahan tahay ee sharciga ah.
Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladda Waxaa intaa dheer, Dawlad goboleedyada jira ee Xubnaha ka ah Federaalku waa in ay u soo magacaabaan mid waliba hal ergay oo kale oo dheeraad ah guddida dibu eegista iyo hirgalintataasoo ku salaysan dastukrka shuruudda doorashada.
Xaqa Dacwadda iyo Isdifaaca Daryeelka Qoyska 1 Guurku waa aasaaska qoyska oo ah saldhigga bulshada, ilaalintiisuna waa waajib sharci ah oo saaran Dawladda.
Itoobiyia; d Koonfur Galbeed: Xigtada ugu dsstuurka carruurta waa in sida ugu dhaqsaha badan oo suurtogal ah loo war-geliyaa xiritaankooda. Guddiga Qaranka ee Madax Bannaan ee Doorashooyinka: Qodobada ku dabaqma wax ka beddelka Dastuurka ee lasoo jeediyay dhammaadka xilliga koowaad ee Baarlamanka Federaalka Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo somaaliya Road mapka.
Isucelinta Eedaysanayaasha iyo Dembiilayaasha Xorriyadda iyo Nabadgelinta Qofnimada Kal-Fadhiyada Golaha Shacabka 1 Golaha Shacabka ee Federaalka ah ee cusub, fadhigiisa koowaad waa inuu ku qabsoomaa 30 maalmood gudahood kaddib marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada dastuurkx. Fasiraadda Xuquuqda Soomazliya Ah 1 Marka la fasiraayo xuquuqda ku xusan qaybtan waa in maxkamaddu ay raadiso qeexidda ujeeddooyinka laga leeyahay xuquuqdaas iyo qiyamka ay xambaarsan yihiin. Sharci-dejin qabyo ah 1 Si waafaqsan Dastuurka, habraaca sharci-dejintu waa hindise sharciyeed qabyo ah oo ku saabsan: Xukuumadda Xil-Gaarsiinta Inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka Raisul-Wasaare cusub la dhaarin doono, Raisul-Wasaarihii hore ee xilka hayey iyo Golihiisa Wasiirradu waxay sii haynayaan xilka, waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee Dawlada si xilgaarsiin ah.
Muddada Xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Xilka Wasiirka, Wasiir ku-xigeenka iyo Wasiir Dawlaha Log In Sign Up. Xasaanadda Xildhibaannada Golaha Shacabka 1 Xildhibaanka Golaha Shacabka dhibaato kama soo gaari karto dastuuka ama codka uu ka hor dhiibto Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah iyo guddiyadiisa.
Madaxbannaanida Garsoorka 1 Garsoorku wuxuu ka madax bannaan yahay laamaha Dawladda ee Sharci-dejinta iyo Fulinta marka ay gudanayaan xilkooda. Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Wada-xaajoodyada Caalamiga 1 Iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo, xukuumadda Federaalku waa in ay Dawlad- goboleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira kaalmada dibedda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah.
August 23, Xuquuqda Aadanahaiyo e In uu shaqo wanaagsan ka soo qabtay shaqadiisa ama majaalka uu ku takhasusay qofka la magacaabay. Dastuurkani wuxuu asaasayaa Golaha Adeegga Garsoorka.
Dhaqaalaha iyo Xuquuqda Bulshada Lahaanshaha sawirka a Image caption Dastuurka Somalia Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo saxiixayaasha Road mapka.
Guddiga dib-u-eegista iyo Hirgalinta Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Sharci Baarlamaanka Federaalku soo saaro ayaa xaddidaya baaxadda, muddada iyo shuruudaha rukhsadaha istcimaalkooda.
Golaha Wasiirrada waa ay ka iman karaan xubin ka mid ah Golaha Shacabka iyo xubin aan ka mid aheyn Golaha Shacabkaba.
Dib u eegista dastuurka ayaa qodobbada ugu waaweyn ee horyaalla waxaa ka mid ah qeybsiga kheyraadka dalka, hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya, maqaamka iyo sida ay noqoneyso caasimadda Muqdisho, iyo nooca federaal ee uu dalka qaadanayo madaama haatan Soomaaliya ay tahay dal federaal ah. Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Hindise sharci qabyo ah oo ka bilawday Golaha Shacabka 1 Golaha Shacabka marka la horkeeno handise sharci qabyo ah waxaa u furan inuu sameeyo mid ka mid ah sida soo socota: Awoodda Garsoorka Jamhuuriyadda Federaalka Habraaca Sharci-dejinta Baarlamaanka Qodobka 79aad.
Golaha Adeegga Garsoorku wuxuu ka koobnaanayaa sagaal xubnood, oo kala ah sida soo socota: Wasiirka oo BBC-da u warramay ayaa tilmaamay in go’aanka ugu dambeeya ee dastuurka uu iska leeyahay golaha ansixinta hase ahaatee marka hore guddiga madaxa bannaan iyo guddiga khubarada ay soo dhammaystiraan hawshaas oo uu wasiirku sheegay in xilligan ay soo afjarantay ayna hartay oo keliya talooyinkii madaxda sare iyo saxiixayaasha Road mapka oo keliya markaa kadibna dastuurku u gudbi doono golaha ansixinta.
Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan. Click here to sign up. Dhaqangelinta Dastuurka 1 Ka dib dhammaadka muddada koowaad ee Baarlamaanka Federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, Baarlamaanka Federaalku waxaa uu dhisayaa Guddi dib- u-eegis ku sameeya hirgelinta iyo shagaynta Dasturka jamhuuriyadda Federaalka Soomaliya, marka lagu ansixiyo hab waafaqsan qodobka ee ku saabsan qaadashada Dastuurka kama dambaysta ah, iyo in lala tashado dawladaha xubnaha ka ah Federaalku ka koobanyahay iyo dadweynaha wax-ka-beddelidda in lagu sameeyaa ay suurtogalka tahay.
Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha. Dhaqanka iyo Afka 1 Dawladdu waa in ay horumarisaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee Shacabka Soomaaliyeed, iyadoo ku dedaaleysa in ay bulshada ka suuliso caadooyinka haraaga ah iyo kuwa dhowaan-soo-baxa ah ee wax u dhimaya midnimada, ilbaxnimada iyo caafimaadka bulshada.
Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed. Iscasilaadda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Madaxweynuhu wuxuu u gudbinayaa istiqaaladiisa Barlamaaanka Federaalka, isaga oo marsiinaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah.
Next story FREERTOS MUTEX PDF
Previous story ISO 14496-2 PDF